कुन बेला महिलाहरू सबै भन्दा धेरै सम्पर्क गर्न चाहन्छन्? – Jagaran Nepal
कुन बेला महिलाहरू सबै भन्दा धेरै सम्पर्क गर्न चाहन्छन्?
एउटा सामान्य मानिसका लागि महिलाहरु कुन समयमा बढी का’मु’क र से’क्सी देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा सामान्य नैं हो । आज हामी यस कुराको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं ।
सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र से’क्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २००० महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूमको हल्का स्प्रे स्पेसल फिल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।